Last updated: Dec. 27 2017 | 4 min akhri
Taariikhaha First noqon kartaa argagax rag iyo dumarba, gaar ahaan marka ay timaado gaadhin ee ugu wanaagsan. Inkasta oo aad taariikhda ugu horeysay u badan tahay inay tagaan doonaa iyada oo aan ku xirid ah, waxaa jira waxyaabo qaar oo nin waluba waa inay ka fogaadaan marka qof dumar ah oo ka soo maalinta koowaad.
Ever kama muuqdaan Late
In aad ku adkeed ee taariikhda marka hore waa waajib sixun. Kor u muujisid in aad wakhtigan danbe siin doonaa taariikhda jawi qaldan. Suuragal ah in ay u hesho aragti ah in aad mar walba waa ay soo daaheen, in aadan daryeeli ku filan oo ku saabsan iyada si ay u muujiyaan ilaa waqtiga, ama, inta aad ka imanayso, waxay u malayn kartaa waxay sheegtay in ay istaagay. Si kasta, waxay ku xidhan tahay inay ku ridaan niyadda xun iyo in ay bilowga taariikhda siin kartaa qoraal ah dhanaan. Haddii aad leedahay ilaa si ay u muujiyaan daahay sababtoo ah ciidamada ka baxsan awooddaada, Hubi inaad wacdo taariikhda si ha ogaado ama, haddii mid idin ka mid ma ay sitaan taleefanka gacanta, wac makhaayad ama shir meel si ay u sii dayn karaa iyada ogahay.
Kama muuqdaan Disheveled iyo Dirty
Waxaa muhiim ah in aad naftaada siiso waqti ku filan ka hor taariikhda in ay kor u bedelo iyo Daryeelka ugu wanaagsan. Haddii aad tusto ilaa taariikhda raadinaya shaggy ugu horeysay, unkept, iyo uraya funky, taariikhda heli doonaa fikrad qaldan oo adiga kugu saabsan. Taariikhda malayn kartaa inaad eegto sidan waqtiga oo dhan oo markiiba waa la damiyay. Sii naftaada waqti badan in aad maydhato, xiirin, iyo dhar aad ku. Taasi qeybtii dheeraad ah saacad noqon kartaa waqtigii aad loogu baahan yahay in aad naftaada siin cidhifka soo jiidasho taariikhda ayaa raadinaya, iyo xusuusan, oo aan lahayn waqtiga si aad u nadiifinayaa ee taariikh ay dhaawici karto ay natiijada. Nin si fiican u labisan xunna labisan guuleysan doono in ka badan slob ka da'day waqti kasta.
Ha Hubi Out dumar ah oo kale Front of Her
Marka aad shukaansi naag, aad naftaada ka go'an iyada muddo ah taariikhda. Taas darteed, Xaqiiqdii waa out of line in la baadhitaan dumarka kale inta aad ku jirtid taariikhda a. Tani waa qallafsan oo aan la aqbali karin. Intaa mashquulaan kale dumar socodka by badan tahay taariikhda dhigi doonaa nabadgelyadiisu hubaal ma iyada ku siin aragti ah in aad xiisaynayso in iyada. Haddii aad si joogto ah eego garabka ugu timo cad kulul miiska soo socda, mid ka mid ah laba shay oo ay si la hubo in dhici: 1) Taariikhda dareemi doontaa mid aad u xun nafteeda ku saabsan, iyada fikirka waa soo jiidasho lahayn ama aan loo baahnayn, ama 2) Taariikhda heli doontaa mid aad u cadhooday, oo ka xumaaday ayaa kula, samaynta guriga drive xun oo fursad sii dhinmaan, oo ah taariikhda labaad.
Ha xukumaan wadahadalka
Marka taariikhda ugu horeysay, waxaa laga yaabaa in aad dareento baahida loo qabo in caddayn aad gabar la sheekooyin iyo tidbits xiiso leh oo adiga kugu saabsan. Taasi waa weyn, laakiin ma cidba. Xusuusnow wada hadal u dhexeeya waa laba qof oo, ma mid qof hadalka ee kale. Waa fikrad fiican inaad la wadaagto qaar ka mid ah sheekooyinka jiidanaya oo afkaar la taariikhda, laakiin hubi in aad siiyo waqti ku filan oo si siman uga qayb qaataan wada hadal ku sameeyaan. Weydii su'aalo iyada nafteeda ku saabsan, this iyada muujin doontaa in aad xiisaynayso iyada oo ku saabsan sida uu qofka oo aad siiso fursad ay ku bartaan dambe iyadii ku saabsan doonaa.
Ha cabashada iyo dacwad u
Haa, waxaan ku dhammaan lahaa maalmaha xun, laakiin taariikhda a (gaar ahaan taariikhda ugu horeysay) ma aha meesha aad hawada u dhan ee aad cabashadooda. Fursadda in, taariikhda ayaa la filaya in ay wanaagsan, waqti xiiso leh markay kulmay ilaa aad la. Haddii iyada lagu Salaamo a 'gaadiidka GOSH ahaa sida painÖI a townî ayay isla markiiba la damiyay doonaa neceb. Cabashada qaybood waa ohyahay camalkooda for walaac ah, taariikhda ku faraxsaneyn. Xitaa haddii aad horay u maalin Qorniinkaas ah, aadan bixin habeenkii cowdo oo ku saabsan. Just ku faraxsan in uu waqti la naagtii waxay aad xiisaynayso. Smiles qaadsiin, sidaa darteed waa weji macbuus ah. Haddii aad u ogaan ama aan, niyaddaada xun saameyn ku yeelan kartaa taariikhda iyo sida ay dareensan adiga kugu saabsan. Waxaad doonaysaa in aad taariikhda in aad xasuusato sida funny iyo Salel, ma Downer ah.
Ha noqon qof Jir xad gudubku
Waxaa aad muhiim u ah in la akhriyo galay calaamadaha aad taariikhda ku siinayaa hor socda ee u dhunkasho (ama ka badan). Si toos ah ha u malayn in sababta keliya oo aad ku lahaa taariikh wanaagsan in aad taariikhda ayaa diyaar u qaado xiriirka jirka in heerka ku xiga. Haddii aad xiisaynayso in dhunkashada taariikhda, bilaaw burburiyaha gacanta, hab a, iyo si tartiib ah u sii wadaan ilaa dhunkasho. Had iyo jeer ixtiraamaan taariikhda ee rabitaanka. Haddii ay yiraahdaan maya siinaysaa horumarinta kasta jirka, qaado iyada jawaab ugu qiimaha wejiga iyo dib u off. Nin waa kuwa aad u dagaal badan marka ay timaado isku dhawaanshaha qof dumar ah oo dami karaa oo run ahaantii laga yaabo inuu naagtii waxay ka cabsan ama walaac.
Iyada ha ku sheeg inaad Wac doonaa Her Haddii aadan ku talo jiro in
Sheegista qof dumar ah 'waxaan wacayaa youî marka aanad doonaynin in sidaas la sameeyo waa fikrad xun. Haddii qofka dumarka ah uu xiiseynayo taariikhda labaad kula, iyada niyad keliya ha la weyneeyo doonaa haddii ay agagaarka suga wicitaankaaga oo kaliya si aad u barato in aad marnaba lahaa ujeeddo kasta oo ku baaqay taariikhda labaad. Haddii aadan rabin inaad u wacdo, kaliya afjaro taariikhda iyagoo odhanayay "Waxaa uu ahaa kulan fiican adiga ama fudud 'nabadgelyo Good, nasasho fiican ee eveningî ah. Sidaas aadan iyada oo keentay on ama helitaanka iyada filayo ilaa. Dhinaca kale warka ka horjeedaan, haddii aad rabtid inaad diyaarin taariikhda labaad, hubi in aad ha ogaado.
Qorshaynta taariikhaha ugu horeysay waxa uu noqon karaa dareemayaasha sugeyso, laakiin ka dib markii qaar ka mid ah tilmaamaha fudud halka taariikhda caawin doonaa si loo hubiyo taariikhda ugu wanaagsan ee suurtogalka. Haddii aad tahay saaxiibtinimo, waqtiga, ixtiraam, oo digtoon, waxaa jira fursad aad iyo aad taariikhda yeelan doontaa waqti aad u weyn oo, haddii jiidashada yahay labada dhinac, taariikhda ugu horeeya waxa uu noqon karaa bilowga xiriirka u qurux badan.